“တစ်လ (၁၀) သိန်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆီကြိတ်စက် ဂယက်နှင့် ကိုယ်တိုင် မွဲဆေးဖော်မိခြင်း အကြောင်း” – စွယ်စုံသုတ
“တစ်လ (၁၀) သိန်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆီကြိတ်စက် ဂယက်နှင့် ကိုယ်တိုင် မွဲဆေးဖော်မိခြင်း အကြောင်း”
တစ်လ ၁၀ သိန်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆီကြိတ်စက်သတင်းလေး အတော်ကို ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်နေလို့ စမ်းကြည့်မိပါတယ်။
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဆီကြိတ်စက်လောကမှာ နှစ်အတန်ကြာ မိဘလက်ငုတ် လုပ်ခဲ့ဖူးတာကိုး။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၂ မောင်ရွှေရိုးလမ်း အမှတ်၁၂၅မှာ ကိုယ်ပိုင်အုန်းဆီစက်ရုံဗျ။ ခုတော့ ဆီဖြူအရောတွေ ခေတ်ဆန်းကုန်လို့ ကြိတ်တာထက် ငှါးစားရတာတောင် ပိုကိုက်နေတာကြောင့် လုပ်ငန်းပြောင်းခဲ့ရတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဝါသနာက မစွန့်နိုင်သေးဘူးကိုး။
အုန်းသီးဖတ်အသား ၁၇ပိဿာကြိတ်ရင် အုန်းဆီအသန့် ၁၀ပိဿာရတယ်။ ဝက်စာ ငါးစာကျွေးဖို့ အုန်းဖတ်က ၅ပိဿာကျော်ရတယ်။ ၂ပိဿာလောက်က အလေအလွင့်ပဲ။ ဒါက ဆီထွက်အများဆုံး အသီးမို့လို့။ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာတို့ဆို ဒီထက်ပိုနည်းသေး။
တပိုင်တနိုင် ဆီကြိတ်စက်လေး စိန့်တိုင်းကနေ မှာလိုက်ပါတယ်။ 1050ယွမ် (မြန်မာငွေ ၂သိန်း၁သောင်း) ကားခ တန်ဆာခ ၂သောင်းလောက် ကျသေးတယ်။
မြေပဲအနီ ၅ပိဿာဝယ်တယ်။ ၃၅၀၀x၅ကြိတ်လိုက်တာ ၂နာရီကျော်ကြာတယ်။
ဆီ ၁ပိဿာ၈၅ကျပ်သား ထွက်တယ်။
တကယ်တမ်း မြေပဲအဖြူဆို ပိုထွက်တယ်။ အများစျေးလှမ်းမေးတော့ ပိဿာ၁၀၀အထက် ၂၈၅၀ တဲ့။
ဆီက ၂ပိဿာခွဲ ပိုပိုသာသာ တွက်အုံး။တပိဿာ ၅၇၀၀ကျမယ်။
မြေပဲဖတ်က ၁ပိဿာ ၅၀၀ထား ။၂ပိဿာမပြည့်တပြည့် ပြန်ရမယ်။
စျေးကွက်ထဲ လက်လီဝယ်မှ အညာဆုံဆီဆိုတာ ၁ပိဿာ၆၀၀၀၊အများယူရင် ၅၂၀၀….ဘယ်လိုသွားရောင်းမလဲ။
သိုလှောင်ခ၊ အတိုးတွက်၊ မြေနေရာ၊ မီတာခ၊ အလုပ်သမားခ၊ မြတ်မြတ်ရှုံးရှုံး လာကောက်မယ့်အခွန်၊ စက်ပြင်စားရိတ် ထည့်စဉ်းစားအုံး။
ဒီမှာကြည့် မြေပဲဆံအစစ်ဒီလိုကြိတ်တယ်။ ဘာမှမရောဘူး။
ဒါက ၇၀၀၀/၈၀၀၀ ရောင်းတယ်။
ဟိုက နောက်ကွယ်ဘာတွေရောမှန်းမသိယှဉ်ကြည့်တော့ ဓာတုတန်ခိုးနဲ့ အတုကတောင် ပိုမွှေးနေသေး။
ခင်ဗျား ဘုရားစူးကျိန်ရောင်းလည်း မဝယ်ဘူးစိတ်ချ။ ပဲပြား ပဲသွေးတောင် ဖော်မလင်လေးပါမှ ခံတွင်းတွေ့တဲ့ဓလေ့က ကြီးစိုးနေပြီလေ။
စန္ဒီပရဆေး မိတ်ဆွေကြီး ဘာဘူဦးတင်မောင်ဆီက မုန်ညင်းစေ့အစစ် ၁၀ပိဿာဝယ်တယ်။ 2500×10
မုန်ညင်းဆီပါ ၁ပိဿာ ဝယ်ခဲ့သေးတယ်။ 4500 တဲ့။
အားပါး….. ခူးပြီးခပ်ပြီးအဆင်သင့်ကမှ 4500ပဲကျတာလေ။ 8000တောင်မှ ပိုကုန်သွားတာကိုး။
စက်ညံ့လို့ ဒီလောက်ဘဲထွက်တာလို့တော့ မဆိုလေနဲ့။
ကြိတ်ဖတ်ကို ရေစိမ်အပေါ်ယံဝေ့တက်လာတဲ့ ဆီကိုပြန်ခပ် ထပ်ပေါင်းအုံး။ ၁၀သားထက်ပိုမထွက်ဘူး။
ယာခင်းထဲထိ သွားဝယ်တဲ့စျေးနဲ့ကြိတ်ရင်ရော ?
မုန်ညင်းစေ့၁ပိဿာ ၁၀၀၀လောက်ပဲကျမှ 4500နဲ့ ရောင်းနိုင်လိမ့်မယ်။
ဆီဖြူကို အုန်းဆီနဲ့ရော ဓာတုနံ့လေးအုပ်တော့ စျေးပေါတယ်။ နှစ်ရှည်ထားလည်း ဆီချေးစော်မနံဘူး။ အစစ်က ၃လကျော်ဆို အနံ့ပြောင်းပြီ။ မိဘများက ရှေးရိုးစွဲ သမာသမတ်ပဲလုပ်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားလေတော့ နောက်ဆုံးမှာ စျေးမယှဉ်နိုင်လို့ လက်မြှောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတာ ကိုယ်တွေ့ပါ။
ပဲဆီထဲရော အညာရနံ့လေး သင်းရဲ့လား ?
ကလေးဗိုက်နာလို့ မုန်ညင်းဆီလူးတဲ့ထဲ မုန်ညင်းစေ့ထဲက ဓာတ်သတ္တိတွေ ဘယ်နှစ်ချိုး ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းများ ပါပါလိမ့်။ ?
စီးပွားတွက်နဲ့ ကြိတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ အရောင်မရှိ အနံ့မရှိတဲ့ စျေးပေါပေါ ဆီဖြူမရောအောင် ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် တားမြစ်နိုင်မယ့် ဥပဒေကိုသာ အရင်ဆုံး မျှော်လင့်ပါအုံးဗျာ။
ကျနော်ကတော့ မွဲဆေးဖော်မိခဲ့ပြီလေ။ ကိုယ့်လို မခံစားရလေအောင် စက်ရောင်းဖို့အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းပြီး ရှိတဲ့စက်ကိုလည်း သော့ခတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ မရောင်းတော့ပါ။
မိဘတွေကအလိုလိုက်ပြီးတော့ တစ်ရက် (၁၀) နာရီကြာအောင် ဖုန်းဂိမ်းပေးကစားခိုင်းမိတဲ့ ကိုးနှစ်သားကလေးရဲ့အဖြစ်
“ကျနော်တို့ ရွှေမြန်မာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ….ထန်းလျက်တောင် အတုချက်နေကြပြီတဲ့ဗျာ…”